ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၌ WORLD BANK ၊ ADB သို့မဟုတ် အခြားဘဏ်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့ငွေ သို့မဟုတ် ချေးငွေဖြင့် အောက်မြန်မာပြည် စပါးစိုက်ပျိုးမှု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (LOWER BURMA PADDYLAND DEVELOPMENT PROJECT – 1976) ကဲ့သို့သော စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသော ငဝက်စွယ်ကျွန်းကို ရေငန်တားတာတမံ အသစ်တစ်ခု ဆည်ဖို့ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ အမှတ်(၇)တိုက်နယ်၊ ရတနအုပ်စုနှင့် ခြုံဆွယ်အုပ်စုတွင်ရှိသော ကျိုးပေါက်နေသည့် တာတမံများကို ဆားငန်ရေမဝင်နိုင်အောင် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ငွေဖြင့် သင်းဂနက် ကျွိန်တောင်နှင့် လကွက်တောင်တို့ကို သွယ်တန်း၍ ဆည်ဖို့ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၄၁ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၃ . ၁၀ . ၂၀၁၆)
စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေအား လာမည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တောင်သူလယ်သမား တစ်ဦးချင်းစီ၏ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖြင့် ထုတ်ချေးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးပြုစိုက်ပျိုးနည်းပညာသင်တန်းများအား ကျေးရွာအုပ်စုအထိ သွားရောက်သင်တန်းပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရော်ဘာခြံ၊ ဆီအုန်းခြံ၊ ယူကလစ်ခြံတို့ကဲ့သို့ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နွားခြံ၊ ငါးကန်၊ ပုစွန်ကန်၊ ကဏန်းကန်တို့ကဲ့သို့သော စီးပွားဖြစ် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဧက ထောင်၊ သောင်းချီသော မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လျှောက်ထားရယူထားခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ထိုအသင်းအဖွဲ့များ ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် မြေယာများအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
မြစ်ဝှမ်းဒေသရှိ ပုံစံ(၇)မရှိသော ကိုင်းကျွန်းမြေများကို စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
တီးတိန်မြို့မှ ကလေးမြို့သို့ အရန်လမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မည့် ဗန်းတဲ့ – ဇုံး – ထန်နွဲ ၁၂.၅ မိုင် ဂျစ်ကားလမ်းကို ၁၈ ပေ အကျယ် လမ်းချဲ့ပေးရန်နှင့် ထန်နွဲနှင့် ထုတ်လိုင်ကြား ၅.၅ မိုင်လမ်းကို ၁၈ ပေ အကျယ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအဖြစ် ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း